Home DCMA Fanamarihana
Fanamarihana ny lalàna momba ny zon'ny milina Digital (DMCA) nomerika.
Ao amin'ny LifeBogger dia manaja ny zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona izahay ary hiara-hiasa amin'izy ireo isika mba hahazoana antoka fa esorina amin'ny serivisy ny fitaovana fanitsakitsahana. LifeBogger mirakitra tantara momba ny fahazazan-jaza sy ny momba ny mpilalao baolina kitra momba ny baolina kitra. Raha mandinika ianao dia mandefasa mailaka miaraka amin'ny antsipiriany mety tsara mba hisarihana ny "copyright copyright infringement" amin'ny alàlan'ny lifebogger@gmail.com. Hanao hetsika fanafody eo noho eo izahay.
Ny fanamarihana Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dia mitaky ny fanambaràn'ny tsy fanarahan-dalàna rehetra ary ny fampahafantarana izany:
Famantarana ara-batana na elektronika an'ny tompon'ny zon'ny mpamorona na olona nomena alalana hisolo tena azy.
Ny filazalazana tsara momba ny asa zon'ny mpamorona voarohirohy dia voalaza fa notohanan'ny LifeBogger.
Famaritana momba ny fanitsakitsahana zavatra sy fampahalalana. Tokony ho ampy tsara izany hamela ny LifeBogger hahita ilay fitaovana.
Ny mombamomba ny fifandraisan-davitra mba hahafahanao mifandray anao amin'ny LifeBogger.
Fanambarana iray nataonao fa manana finoana tsara ianao fa ny fampiasana ny fitaovana dia tsy omen'ny tompon'ny copyright
Fanambarana iray fa ny fampahalalana eo amin'ny fampandrenesana dia marina. Ankoatr'izay, eo amin'ny sazy fanamelohana, fa ny fampahalalana izay omenao anay dia marina ary ianao no tompon'ny zon'ny mpamorona na nahazo alalana hihetsika ho an'ny tompon'ny zon'ny mpamorona.
LifeBogger hanao tsara indrindra amin'ny famaliana ny “rehetra angatahina fangatahana”Izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàm-panoratana Digital Millenium (DMCA), ary ireo lalàna momba ny fananana ara-tsaina hafa.